"Mifalia, satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo." Lioka 10:20
Lazaina fa i Voltaire, ilay filôzôfa malaza, dia te hampifalifaly ny olona nandritra ny fanasana iray, ka niteny hoe: “Amidiko volamena tsy vaky iray ny toerako any am-paradisa!”
Rehefa nangina ela ny olona, dia nisy nitsangana nanao hoe: “Tompokolahy, izay olona te hivarotra zavatra iray dia mila manaporofo aloha fa azy tokoa ilay zavatra. Raha asehonao ahy ny taratasy manamarina fa manana toerana any am-paradisa ianao, dia hovidiko aminao amin’ny vidiny tadiavinao izany”. Voatery nanginai Voltaire, ilay lehilahy narani-tsaina ka nanan-kavaly hatrany tamin’ny zavatra rehetra.
Izany hanihany mifono fihantsiana izany anefa dia maneho fa niasa saina momba ny any ankoatran’ny fahafatesana ilay nanao azy, ary tsy nanana antoka akory ny amin’ny tenany manokana.
Mifanohitra amin’izany kosa, izay mino fa miteny amintsika amin’ny alalan’ny Baiboly Andriamanitra, dia mahafantatra izay ianteherany. Tsy afaka hiahiahy ny fahamarinan’izay lazain’i Jesosy izy. Fantany fa misy toerana nomanina ho azy any an-danitra. Talohan’ny hahafatesany Jesosy dia niteny tamin’ny mpianany hoe: “Ao an-tranon’ny Raiko misy fitoerana maro… handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho” (Jaona 14:2). Efa nefainy ny vidin’izany. Ampahatsahivin’ny apostoly Petera fa isika dia navotana tamin’ny “ra soan’i Kristy” (1 Petera 1:18,19).
Raha niresaka momba ny hahafatesany ny apostoly Paoly, dia nanambara ny faniriany handao ny fiainana etỳ an-tany “ka ho ao amin’i Kristy, satria tsara lavitra izany” (Filipiana 1:23). Ho an’ny mpino, dia harena tsy hay vinavinaina ny fananana antoka fa haka ny toerana efa voaomana ho azy any an-danitra izy, indray andro any. Izany fanantenana izany dia mbola atolotra anao indray, ary maimaimpoana. Natao ho anao koa izany!